Taliyaha ciidanka Asluubta oo ka digay in la dhisto dhulalkii ciidanka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Taliyaha ciidanka Asluubta oo ka digay in la dhisto dhulalkii ciidanka
Taliyaha ciidanka Asluubta oo ka digay in la dhisto dhulalkii ciidanka
Taliyaha ciidanka Asluubta Sareeyo Gaas Xuseen Xasan Cismaan iyo saraakiil uu hogaaminayo ayaa maanta kormeeray dhul ku yaala degmada Karaan oo ay leeyihiin ciidanka Asluubta, kaasi oo ujeedkiisu ahayd u kuurgelidda dhulka oo kaabiga ku haya Isbitaalka Keysaney.
Taliyaha ayaa ku soo wareegay qeybaha uu ka koobanyahay dhulka, waxaana halkaasi ka socotay howlo dhismo ah.
Sareeyo Gaas Xuseen Xasan Cismaan oo kormeerka kaddib la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa digniin u jeediyay dadka sida sharci darrada ah u dhisanaya xarumaha danta guud, waxaana uu intaa ku daray in ciddii lagu hela iyada oo dhisaneyso xarumaha ciidanka Asluubta laga qaadi doono tallabo sharciga waafaqsan.
“Waxaan u sheegeynaa shacabka iyo ganacsatada ku howlan dhismaha xarumaha ciidanka Asluubta inay joojiyaan dhismooyinka sharci darrada ah, cid Alaalle iyo ciddii dhisatana waan ka bur burineynaa dhismooyinka” ayuu yiri Taliyaha Ciidanka Asluubta.
Taliyaha ciidanka Asluubta Sareeyo Gaas Xuseen Xasan Cismaan ayaa tan iyo markii uu xilka la wareegay waxa uu bilaabay kormeeridda xarumihii ciidanka Asluubta, waxaana taasi ay qeyb ka tahay dadaallada uu kaga hortagayo in la boobi dhulkii ay lahaayeen ciidanka Asluubta.
Previous articleIsutaga Imaaraadka Carabta (UAE) oo yabooh 45 milyan oo dollar u sameeyey shacabka Soomaaliyeed
Next articleWasiirka Waxbarashada oo shaaciyay xilliga uu bilaabanayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare